ပျိုမေတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက် နှုတ်ခမ်းနီအသစ်တွေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်တဲ့ Kylie Jenner | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပျိုမေတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအတွက် နှုတ်ခမ်းနီအသစ်တွေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်တဲ့ Kylie Jenner
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး Kylie Jenner ဟာ အမေရိကန် အမျိုးသမီး ဘီလျှံနာတစ်ယောက်ပီပီ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ သူအဓိကလုပ်တဲ့ စီးပွားရေးကတော့ အလှအပ မြတ်နိုးကြတဲ့ ပျိုမေတွေ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေအတွက် မရှိရင်မဖြစ်တဲ့ အလှကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်တာမျိုးပဲပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေထဲမှာတုန်းကတော့ Kylie Jenner ဟာ အလှကုန်အသစ်တစ်မျိုးကို စမ်းသပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးတွေဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တစ်စွန်းတစ်စလေး ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက သူမ ဒီတခါမိတ်ဆက်ပေးမှာ ဘာအလှကုန် ပစ္စည်းများလည်း ရယ်လို့တော့ ကွဲကွဲပြားပြား မသိခဲ့ကြပါဘူး။
အခုတော့ Kylie Jenner ဟာ သူထုတ်လုပ်တဲ့ အလှကုန်တွေကိုမှ မြတ်နိုးနှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလှကုန်အသစ်ကို ချပြလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အလှကုန်သစ်ကတော့ ပျိုမေတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ရှိရင်းစွဲ အနေအထားထက် ပိုမိုပြောင်လက်တောက်ပပြီး ဖူးဖူးကြွကြွနဲ့ လှပလာအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ့် အလှကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
new goodies just dropped on KylieCosmetics.com 🎀 #HIGHGLOSS @kyliecosmetics
A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 8, 2018 at 3:18pm PST
နှုတ်ခမ်းနီပေါ်မှာထပ်ပြီး အရောင်တင်တဲ့သဘောနဲ့ ဆိုးရမယ့် အဲဒီ High Gloss အမျိုးအစား အလှကုန်ပစ္စည်းလေးဟာ ၇ မျိုး လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုးထားလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အဖြူရောင်သန်းတဲ့ ရေခဲမှုန်လေးတွေကပ်နေသလို တောက်တောက်ပပ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အရောင်လေးတွေကနေစပြီး ကြေးနီရောင်လေးတွေသန်းတဲ့ အရောင်လေးတွေအထိ အရောင်အနုအရင့် ရ မျိုးကို ထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Kylie Jenner ဟာ သူ့ရဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေအကြောင်းကို သူရဲ့ Instagram နဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေမှာ သေသေချာချာတင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အလှကုန်တွေရဲ့ တရားဝင် စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Twitter နဲ့ Instagram တွေပေါ်က Kylie Cosmetic ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်း သေသေချာချာတင်ပြီး ကြေညာထားတာကို မြင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
စျေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ တစ်ခုချင်း ယူမယ်ဆိုရင် ၁၆ ဒေါ်လာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကနေဒါ ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့ ၂၀ ၀န်းကျင်လောက် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။) အဲ… ၇ မျိုးလုံးပါတဲ့ တစ်စုံလုံးကို ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (အဲဒီလိုဆိုရင် ၁၂ ဒေါ်လာလောက် သက်သာသွားမှာ အမှန်ပါ။)
Who’s ready for #HIGHGLOSS!?7brand new shades to mix + match with any look! $16 each or $100 for the bundle! 😘 pic.twitter.com/5BeimwSD1l
နောက်ပြီး… အခုထွက်ရှိလာတဲ့ Kylie Jenner ရဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း အသစ်လေးတွေကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကစပြီး ဝယ်ယူအားပေးလို့ ရနေပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်နော်။ ။
Black Friday မှာ ဝယ်ယူထားသင့်တဲ့ Cosmetic Brand များ
Tags: kylieLip Gloss